Yurub Waxay Si Adag Uga Fikiraysaa Furriinka Ameerika | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdijabaar Sh. Axmed — March 11, 2020
Yurub Waxay Si Adag uga Fakaraysaa Sidii ay u Furi Lahayd Ameerika! Xariirka Yurub iyo Mareykan ayaa ah mid aan sidaas usii wanaagsaneen illaa wakhtigii uu xukunka qabsaday Madaxweyne Donald Trump. Sidaas awgeed, hoggaamiyaasha Yurub waxay ku mashquulsan yihiin fikirka ah inay kaligood socdaan laakiin Washington waa inay diyaar u ahaato inay ugu yeerto maskaxdooda!
Shirka Amniga ee Munich ee sannadkan wuxuu ku qabsoomay cinwaanka “Westlessness.”
Ujeeddada ayaa ahayd mid Cad
Ma ahan oo keliya Mareykanka iyo Yurub inay bannaanka u soo saaraan, mawqifyada ku aaddan wax kasta oo ka yimaada isgaarsiinta illaa tamarta, laakiin waxay soo saareen is afgaran waa weyn oo ku saabsan dhismayaasha aasaasiga ah ee xiriirka shisheeye taas oo ah sida nidaamka caalamiga ahi u shaqeeyo.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa qabsaday aragtidaas, isaga oo u diray qalbi fariin ee Yurubiyaanka ah isagoo ku baaqaya “waddo reer Yurub ah” isagoo sare u qaadaya suurtagalnimada in Ruushku hoggaamiyo Yurub ee Nuclear-ka, taasoo shuruud u ah xorriyadda dhabta ah ee ka timaada Maraykanka.
Waa aasaaska xiriirka caalamiga ah in dimoqraadiyaduhu aysan dagaal u gelin midba midka kale. Waxa cad, shuruudaha ay ugu kala goyn karaan dhismayaasha istiraatiijiyadeed ee la tartamaya. Taariikhda waxaa ka buuxa tusaalooyin dimoqraadiyadiyo isku xidhnaan iyo isbahaysi istiraatiiji ah, laakiin tusaalooyin yar oo ka mid ah wadamada noocaas oo kale ah oo isu-beddelaya una beddelaya kooxo is-bahaysi siyaasadeed.
Mareykanka iyo xulafadiisa Yurub miyay ku socdaan dariiqa furriinka taariikhiga ah?
Bishii Janaayo, Pew Research wuxuu soo saaray ra’yi ururin muujineysa in 57 boqolkiiba dadka reer Jarmal ay leeyihiin aragti aan fiicnayn oo ku aadan Mareykanka. Dhowr bilood ka hor, bishii Sebteember, Golaha Yurub ee Xiriirka Dibadda ayaa sheegay in boqolkiiba 70 dadka Jarmalka ay doonayaan in waddankoodu uu dhexdhexaad ka noqdo wixii khilaaf ah ee u dhexeeya Moscow iyo Washington.
Qaar ka mid ah dadka Jarmalka, maalgashiga Anglo-Saxon ayaa loo arkaa inay yihiin arxan laaweyaal iyo xidid la’aan, taas oo hoos u dhigaysa kala dambeynta bulshada ee u adeegta damac shaqsiyadeed. Kuwa kale, awoodda Mareykanka ee reer galbeedka ayaa keentay xanaaq badan.
Si kastaba ha ahatee, Jarmalka wuxuu ka xuntahay in Mareykanka, iyo gaar ahaan maamulka Madaxweyne Donald Trump, aysan la wadaagin ixtiraamka ay u hayaan hamiga udub-dhexaadka Shirka Amniga ee Munich: Diblomaasiyadda Kala Duwan.
Xaqiiqdii, xittaa xorriyadaha Mareykanka waxay shaki ka qabaan hannaanka isku-xirnaanta Yurub. Sida hay’adda Brookings Institution ee Thomas Wright uu sheegay dhawaan, bidixeynta Mareynka wuxuu doorbidayaa “qaab ku saleysan qiyamka dadka la midka ah in la taageero fikradda gaarka ah ee nidaamka caalamiga ah” halkii laga fulin lahaa “mashruuc la isugu keenayo qof walba oo ay ku jiraan wadamo ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Ruushka. wadajir. “
Qaabkaasi ayaa laga yaabaa inuu soo dhaweynayo Jarmalka intii uu maamulka Trump diiradda saaray natiijooyinka geeddi-socodka, laakiin wali dharbaaxo ayey ku tahay Jarmalka, oo khibraddiisa farsamo ay ku sii jirtey hawada aan caadiga ahayn ee dowladnimada adduunka laakiin ku soo dhacday dhulka hoose ee tartannada juquraafiyeed.
Magaalada Munich, Saraakiisha Jarmalka waxay si sharaf leh uga dhawaajiyeen shirkoodii ugu dambeeyay ee Liibiya, kaasoo ku guuleystey inuu ka helo taageero Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay, laakiin waxay qireen in dadaalkooda ay sameeyeen wax yar oo ay ku gaabiyeen khilaafka dhabta ah ee ka taagan. Iyada oo Jarmalka ay ka careysiisay Mareykanka (iyo Ingiriiska oo gadaal marsaday Brexit), Faransiisku wuxuu aqoonsaday fursad lagu soo bandhigo riyadiisa Gaullist.
“Gaullism waa mowqif siyaasadeed oo Faransiis ah oo ku saleysan fekerka iyo ficilka.”
Iskhilaafyadaasi waxay kusii nagaadeen heer farsamo ahaan sabab fudud awgeed: dabaqada siyaasadeed ee Mareykanka ayaa hubanti ah in Yurub aysan dhabtii ka bixi doonin. Tani waa run seddex arrimood oo lagu soo bandhigay shirkii Munich.
Midda koowaad, Yurub wali wey kala qeybsan tahay. Magaalada Munich, Wakiilka Sare ee Midowga Yurub Josep Borrell ayaa hadalkaan ka sheegay xili uu socday wadahadalo xasaasi ah oo uu la yeeshay Wasiirka Arimaha Dibada ee Poland Jacek Czaputowicz, kaas oo adkeeyay isku dheelitirka hadaladiisa oo ku adkeynaya.
“Waxaad ku nooshahay xorriyad sababta oo ah Vatican-ka iyo Mareykanka”
Borrell ayaa tiriyey.
“Laakiin waxaan ku noolaa afartan sano kaligii taliye ah sababtuna tahay Vatican-ka iyo Mareykanka. Ma dhihi karo waxaan u arkaa Mareykanka si la mid ah.
Xittaa xulafada ugu dhow ee xulafada la ah, Jarmalka iyo Faransiiska, waxay khiyaameeyeen kala duwanaansho aad u daran intii lagu jiray shirka.
Macron wuxuu adeegsaday qaab faneed cusub wuxuuna bilaabay qulqulatooyin wax khalkhal galinaya dhawaanahan, kuwaas oo dhamaantood ku dhaca isku dhaca shidaalka, habka saadaalinta badan ee uu doorbiday Berlin.
Markuu Macron soo dhammeeyay diplomasiyada cusub, oo ay kujiraan wadiiqooyin istiraatiiji ah oo lagu tegayo Ruushka, Berlin way faaruqday. Laga soo bilaabo galbeedka Balkans ilaa Liibiya, labada waddan ee ugu muhiimsan Yurub waxay ku kala aragti duwanaayeen.
Kala duwanaanshahaasi wuxuu gaarsiisan yahay qaab dhismeedka siyaasadeed ee Yurub. Macallinnimadiisii caadiga ahayd, Macron wuxuu u duulay Munich si uu khudbad u bixiyo laakiin sidoo kale wuxuu la shaqeeyaa saxaafadda Jarmalka oo uu la kulmaa xisbiga mucaaradka ah ee waddanka oo dhan adeeggiisa himilooyinkiisa Yurub.
“Haddii hoggaanka Jarmalka sidan u dhaqmo Paris gudiheeda,” mid ka mid ah ka qeybgaleyaasha ayaa yiri dhacdooyinka Macron ee munaasabadaha, “caro ayey dhalin laheyd.”
Taa bedelkeed, hoggaamiyaha Jarmalka Merkel waxay diiwaangelisay codsigii Macron ee Yurub waliba inbadan oo aamusnaan badan leh. Dadka Mareykanka ah, casharku wuxuu umuuqdaa mid cad: Cabashada Mareykanka waa hal shay; oo ku xadgudbay amar reer Yurub oo madaxbannaan mid kale dhammaantood.
Mida labaad, oo ku saleysan gabi ahaanba tilmaam kasta oo awood ah, Yurub waxay ku jirtaa geeddi-socodka daciifnimada. Dhaqaalaheeda qarsoon ayaa ka maqan dhaqan qaadashada halista ah, isla markaana tirakoobyadeeda ayaa ka sii daraysa oo sii xumaanaya.
Awooda millatari ee Galbeedka Yurub ayaanan sii badneen. “Waa maxay ujeedadu in shir amniga lagu qabto wadan ciidankiisu ka yaryahay kan Faransiiska?” khabiir Mareykan ah ayaa igu yiri sidaas shirka ka dib.
Xittaa nidaamka guud ee lagu kalsoonaan karo ee qaaradda ayaa hoos u dhacaya. Qofna ma dhihi karo xisbiyada dhexe waa hubaashii dab-damiska si loogu guuleysto sannadka 2020-ka; xitaa Macron waxaa laga yaabaa innuu ku dhibtoodo inuu qabto maalinta oo uu sii joogo Élysée. Natiijo ahaan, marka ay Mareykanku fiiriyaan xagga Yurub, waxay u arkaan qaarad calan u baahan oo u baahan taageero Mareykan halkii ay ka ahaan lahayd midowga Yurub.
Qodobka saddexaad, Mareykanku waxay aqoonsan yihiin in Yurub ka maqan tahay awood soo jiidasho leh. Maanta, adduunka ma jiro koox kale oo ka weyn oo ka badan kuwa Ameerika. Si kale u dhig, haddii Yurub runtii ka go’do Mareykanka, way ku dhib badnaan lahayd in la helo dhinac saddexaad oo ka doorta Mareykanka.
Maxaa yeelay laga soo bilaabo Jerusalem ilaa Tokyo, shuraakeyaasha dabiiciga ah ee reer Yurub dhamaantood waxay xiriir dhaw la yeeshaan Washington marka loo eego Brussels.
Si loo hubiyo, waxaa jiri kara isbahaysi ruxruxo ah oo diyaar u ah dadaallada Yurubiyaanka, ha haatee Ururka Ganacsiga Dunida. Laakiin si xad dhaaf ah, xarumaha awoodaha adduun weynaha midna ma wadaagaan xiriirka qaraabada Yurubiyanka ama astaantiisa gaarka ah ee dibloomaasiyadda dhinacyada badan leh.
Sidaas darteed, Mareykanka waxay garwaaqsadeen in Yurub ay aad ugu egtahay inay kala soocdo arrin-mawduuc-ka-sooca Mareykanka marka loo eego qaab istiraatiiji ah oo madax bannaan. Si kastaba ha noqotee, adduunku wuxuu noqonayaa dalabyo ku saleysan iskaashi. Gaar ahaan, labada dowladood ee awoodaha, Shiinaha iyo Ruushka, waxay ku dhiirigelinayaan Yurub inay ka fogaato Mareykanka. Labaduba waxay soo bandhigayaan waxyaalo kale oo qiimahoodu jaban yahay oo ah amar caalami ah oo madaxbannaan oo ku saabsan isgaarsiinta iyo tamarta.
Gaar ahaan, ku tiirsanaanta dhaqaale Jarmalka ee Shiinaha ayaa ku riixaysa Mareykanka oo waligeedba ku sii dhowaanaysa dhexdhexaadnimada arrimaha muhiimka ah ee amniga. Habkaas ayaa loo badinayaa innuu sii kordho sanadaha soo socda.
Halkii ay gadaal ka riixi lahayd istiraatiijiyadda Ruushka ee ku-takri-falka tamarta ama awoodda Shiinaha ee Teknolojiyada Amniga Qaranka, Jarmalka waxaa laga yaabaa inay si fiican isu beddesho oo Switzerland is beddeshay.
Tani waxay siin doontaa daboolid dadka kale ee reer Yurub ee isha ku haya fursadaha dhaqaale ee Shiinaha. Magaalada Munich, tusaale ahaan, Wasiirka Arrimaha Dibada ee Talyaaniga Luigi Di Maio wuxuu soo bandhigay difaac dheer oo ah go’aanka Talyaaniga ee ku biirista Belt iyo Road Initiative. Haddii ay jirto wax aan xasilooni lahayn, sidaa darteed, waa sida dhakhsaha leh ee dadka reer Yurub qaarkood u iloobeen sida ay dunidu ugu muuqan karaan ka hor Pax Americansana.
Marar dhif ah ayaa reer galbeedku u ahayeen sidii ugu fiicnaa sida ay hadda tahay. Mareykanka waxaa laga yaabaa inuu dalbado xiriir dheellitiran oo ku saabsan wax kasta oo ka yimaada ganacsiga illaa amniga, laakiin taasi waa qiimo yar oo lagu bixiyo waxa ay tahay in nidaamka caalamiga ah ee Mareykanka hoggaamiyo uu bixiyo.
Mareykanka waxaa laga yaabaa innuusan ahayn mid raqiis ah, laakiin si ka duwan Shiinaha, jaceylka uu u qabo Yurub waa mid dhab ah oo waara.
Tags: Yurub Waxay Si Adag Uga Fakaraysaa Furriinka Ameerika
Next post Wax Ma'aqriyo?
Previous post Doodda Maxaa Dagaal u Badala?